Mgbakwunye Marketing na CAN-SPAM Nnabata | Martech Zone
M na-ekiri ọtụtụ ndị enyi m na ụlọ ọrụ ahụ na-egwu ngwa ngwa ma na-agbachikwa na iwu, ana m atụ ụjọ na ha ga-enwe nsogbu n'otu ụbọchị. Amaghị ama abụghị ihe ngọpụ ma ebe ọ bụ na ndị a bụ nsogbu usoro iwu, ọ dị mma mgbe ụfọdụ ọ dị oke ọnụ karịa ịkwado ya na iwu. Abụọ n'ime mmebi iwu m hụrụ bụ:
Gaghị ama na ị nwere mmekọrịta ego na ụlọ ọrụ - ma ị bụ onye nwe ya, onye ọorụ ya, ma ọ bụ onye na-enwe mmetụta akwụ ụgwọ iji kwalite ụlọ ọrụ ahụ bụ mmebi iwu ọ bụla Ntuziaka gbasara ojiji nke Endorsements ma ọ bụ Akaebe na Mgbasa Ozi.
Spamming ndị nwere onyinye mmekọ na ị nweghị mmekọrịta azụmaahịa ọ bụla gara aga yana anaghị enye ụzọ ọ bụla ị ga-esi wepu aha. Ndị na-ede blọgụ na ndị ọchụnta ego yiri ka ha na-eme nke a ntakịrị, na-eche na onye ọ bụla ha zutere na ha nwere ike ịrịọ. Agbanyeghị, ha nwere ike na-akwụ nnukwu ụgwọ ma ọ bụrụ na ha akwụsịghị imebi iwu. Gụọ Kedu ihe bụ CAN-SPAM Act?
Ọbụna ma ọ bụrụ na onye na-ezipụ kwekọrọ na CAN-SPAM, ha ka na-ekpughere mmekọrịta ego na onye nnabata ahụ. Ọ bụrụ na ịmara onye na-emebi iwu ọ bụla, zigara ha njikọ isiokwu a ma dọọ ha aka na ntị ka ha kwụsị.
I nwere ike ịbụ kọọrọ ndị FTC ma chee ihu ọma ruru $ 16,000 maka ozi email ọ bụla dị iche iche ezitere!
Nke a bụ nkọwa info zuru ezu site na NzuzoPolicies.com:
Tags: mgbasa oziMgbakwunye marketingnwere ike spam emeNwere ike SPAM nnabatanwere ike-spamspam oziendorsementsntuziaka banyere iji nkwado ma ọ bụ akaebe na mgbasa oziiwu nzuzospamtestimonials